दर्शक बनाम समुदाय: के तपाईंलाई भिन्नता थाहा छ? | Martech Zone
शनिबार, जून १,, २०१। आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
हामीले शुक्रबार चिकासा राष्ट्रका एलिसन एल्ड्रिज-सौरसँग अद्भुत कुराकानी ग had्यौं र म तपाईंलाई सुन्न प्रोत्साहित गर्दछु। एलिसन डिजिटल भिजन अनुदानको एक भागको रूपमा एक श्रृंखला लेखेर, एक आकर्षक परियोजनामा ​​काम गर्दैछ मूल निवासी अमेरिकी पाठ समुदाय निर्माणको लागि.
उनको श्रृंखला को भाग दुई मा, एलिसन छलफल दर्शक बनाम समुदायहरू। यसले मलाई सम्पूर्ण शृ .्खलाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्वहरू मध्ये एकको रूपमा प्रहार गर्यो। म निश्चित छुईन कि धेरै धेरै बजारहरूले श्रोताहरू र एउटा समुदाय बीच यति भिन्न भिन्नता छ भनेर बुझे। यहाँ सम्म कि मार्टेकमा पनि हामी उत्कृष्ट दर्शकहरू निर्माण गर्ने शानदार काम गर्छौं ... तर हामीले वास्तवमा एउटा समुदायको विकास गर्ने रणनीति विकास गरेका छैनौं।
एलिसन बीचको भिन्नता छलफल गर्दछ तपाइँको दर्शक निर्माण गर्दै - सुन्दै, स ,्लग्नता, सान्दर्भिक सामग्री, वफादारी अंक, gamifications, उपहार अर्थव्यवस्था, दिनुहोस्- aways र सन्देश स्थिरता। केही तर्क गर्न सक्छन् कि यो समुदाय निर्माण पछाडि रणनीति हो ... तर त्यहाँ एक प्रश्न छ कि उत्तर दिनेछ कि तपाईंसँग एक वा अर्को छ कि छैन। के समुदाय तपाईंको बिना, तपाईंको सामग्री बिना, तपाईंको प्रोत्साहन बिना, वा समग्र मूल्य बिना तपाईंले तिनीहरूलाई लाउनुहुनेछ? यदि उत्तर होईन (जुन यो सम्भवतः हो), तपाईंले एक दर्शक पाउनुभयो।
तपाईंको समुदाय निर्माण गर्दै धेरै फरक रणनीति हो। सामुदायिक निर्माण उपकरणहरूले समूहको नामकरण, घटनाहरू र व्यक्तिहरू, भित्री जार्गन प्रयोग गरेर, तपाईंको आफ्नै प्रतीकहरू भएको, विकास गर्दै साझेदारी गरियो कथा, मूल्य प्रणाली, अनुष्ठान, सहमति भवन र पौडिing स्रोतहरू भएको। समुदाय नेता, प्लेटफर्म, वा यहाँ सम्म कि उत्पादन (विचार Trekkies) पछाडि बाँच्न। वास्तवमा, एलिसनले केही अविश्वसनीय भनेको हामीले उनीसँग कुरा गरिरहेको बेला भनें ... समुदायमा एक ब्रान्ड अधिवक्ता अक्सर मार्केटिंग टीम भन्दा लामो समय सम्म रहन सक्छ!
त्यसो भन्दैमा केवल एक दर्शक हुनु नराम्रो कुरा हो ... हामीसंग एक ठूलो दर्शक छ जुन हामी धेरै धन्यवादी छौं। जे होस्, यदि भोली भोली गायब भयो, म डराउँछु दर्शकहरूले पनि! यदि हामी वास्तवमै स्थायी छाप निर्माण गर्ने आशा गर्छौं भने हामी एउटा समुदायको विकास गर्न कार्य गर्दछौं।
यसको एक उत्कृष्ट उदाहरण अन्य उत्पादन समीक्षाहरू बनाम तुलना गर्दैछ एन्जीको सूची (हाम्रो ग्राहक) एन्जीको सूचीमा रहेको टोलीले समीक्षालाई आदेश दिँदैन, अज्ञात पूनरावलोकनहरूलाई अनुमति दिँदछ ... र ती दुवै पक्षहरूसँग उचित व्यवहार भएको सुनिश्चित गर्नका लागि व्यवसाय र उपभोक्ताहरू बीचको रिपोर्ट मध्यस्थतामा उल्लेखनीय काम गर्छन्। नतीजा एक पागल समर्पित समुदाय हो जसले सयौं गहन पूनरावलोकन साझा गर्ने व्यवसायको उनीहरूसँग कुराकानी गर्दछ।
जब मैले व्यक्तिगत रूपमा सेवाका लागि साइन अप गरें, मैले सोचें कि म येलप जस्तो केही चीज हेर्दै छु जहाँ एक व्यापार सूचीबद्ध थियो र त्यहाँ एक दर्जन पूनरावलोकनहरू थिए जसलाई एक वा दुई वाक्य मुनि राखिएको थियो। यसको सट्टामा, मेरो क्षेत्रमा प्लंबरको लागि सानो खोजीले सयौं प्लंबरलाई हजारौं गहिराई पूनरावलोकनहरूको साथ पहिचान गर्‍यो। मैले पानी संकुचनको स्थापनाको लागि ठूलो रेटिंगको साथ प्लम्बरमा यसलाई संकुचन गर्न पनि सकेको थिएँ। परिणाम यो थियो कि मैले एक ठूलो मूल्यमा एक ठूलो पानीको हीटर पायो र मलाई चिटिक्क पार्नु पर्दैन कि म फालिरहेको छु कि छैन। एउटा लेनदेनमा, मैले सदस्यताको पूरा बर्ष बचत गरें।
यदि, कुनै निराश कारणले गर्दा एन्जीको सूचीले यसको ढोका बन्द गर्ने निर्णय गर्यो भने मलाई कुनै श have्का छैन कि तिनीहरूले प्रस्तुत गरेको समुदायले सही र निष्पक्ष रिपोर्ट गर्ने व्यवसायमा उनीहरूले गरिरहेका अविश्वसनीय कार्य गर्न जारी राख्नेछन् भन्ने कुरामा म श no्का गर्दछु। येल्प र गुगल सँग ठुलो दर्शक हुन सक्छ ... तर एन्जीको सूचिले समुदाय निर्माण गर्दैछ। यो धेरै फरक छ।
तपाई के निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ?
टैग: दर्शकदर्शक भवनचिकासाChickasaw राष्ट्रसमुदायसामुदायिक भवनसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया रणनीतिहरु
Email ईमेल मार्केटिंग उपकरणहरू तपाईंलाई यसको बारेमा जान्नु आवश्यक छ
जुन 15, 2012 मा 12: 13 PM
म पक्कै पनि आशा गर्छु कि म समुदाय निर्माण गर्दैछु। म यहाँ नभए पनि बढ्दै जाने कुरा चाहन्छु। यो देखाउन जान्छ कि मैले जारी राख्न लायक केहि गरेको छु।
सेप्टेम्बर 10, 2012 बेलुका 12:38 बजे
धेरै सत्य - तपाईंले मानिसहरूलाई आफ्नो समुदायको बारेमा उस्तै (वा बढी) उत्साहित बनाउन आवश्यक छ। यो वास्तवमा यो कसरी जान्छ जब तपाईं आफ्नो कम्पनी पनि चलाउनुहुन्छ। यदि म एक हप्ताको लागि अफिसबाट टाढा हुन सक्छु र म बिना कम्पनी सजिलै संग चल्छ, मलाई थाहा छ मैले केहि सही गरेको छु।